Gurukota rezvekunze reJibouti rinoburitsa chirevo pamhirizhonga kuBalbala
Location: musha » Kutumira » Newsletter » Gurukota rezvekunze reJibouti rinoburitsa chirevo pamhirizhonga kuBalbala
DJIBOUTI, Djibouti - Gurukota rezvekunze reRepublic of Djibouti HE
DJIBOUTI, Djibouti - Gurukota rinowona nezvekunze muRepublic of Djibouti MUMWE Mahamoud Ali Youssouf ataura nhasi achiti vanhuwo zvavo 19 vakaurayiwa kuBalbala panguva yemusangano wechitendero nezuro vakawedzeredzwa.
Iko kuungana kwakaitirwa kurangarira kuzvarwa kwemuporofita Mohammed. Vatungamiriri venharaunda vaive vabvumirana nevakuru kuti vaungane panzvimbo yakatarwa. Zvisinei, mazana evanhu akazoungana panzvimbo isina kutenderwa. Pakasvika mapurisa makumi mashanu kuzofambisa vanamati murunyararo kunzvimbo yakabvumiranwa, kukakavadzana kwakamuka uye pfuti dzakaridzwa kubva muboka revanhu. Izvo zvakazoonekwa gare gare kuti vashoma vevanhu pagungano vaive vakapakata pfuti dzeKalashnikov, mapanga nemapanga.
Sezvo mapurisa aisatarisira mhirizhonga, vakadaidzira mamwe mauto nemauto. Pamwe chete, makumi mashanu emapurisa akakuvara. Makumi mana nevaviri vakakuvara zvishoma uye vakarapwa muchipatara vasati vaburitswa. Mapurisa masere anoramba ari muchipatara, vaviri vacho vachitambura nemaronda ekupfurwa.
Vanomwe vanhuwo zvavo vakafa. Vamwe makumi maviri nevaviri vakakuvara. Vane gumi nevaviri vevanhu ava vakakuvara zvishoma uye vaburitswa muchipatara.
Mamiriro acho akadzikama uye zvese zviri pasi pesimba.
Nhasi, vatungamiriri venharaunda yakakanganiswa vakaratidza runyararo kumhuri dzevakauraiwa. Vakashorawo avo vakaita mhirizhonga nezviito zvavo zvaiitirwa kukonzera nyonganiso muJibouti.
Hurumende inoshoreka kuyedza kwevanopikisa kupisa mamiriro ezvinhu nekushandisa masocial network kukurudzira ruvengo nemhirizhonga.
Muchuchisi Mukuru weRepublic of Djibouti akatanga kuferefeta zviri pamutemo. Pakasungwa vanhu vakawanda uye mamwe mashoko achaziviswa munguva yakafanira kana ongororo yapera. Tichaona kuti vakapara mhosva vatongwa.
Ngochani senge Florida Tourism kupfuura maLesbian
Mabiko eZuva reGore Idzva raMambokadzi Mary anoenda pasi rose
Chekutanga Chirwere-Kugadzirisa Therapy yeRudzi 1 Diabetes